Barcelona Oo Dooneysa Inay Ugu Danbeyn Keento Xidig Ka Tirsan Manchester United
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo Dooneysa inay ugu Danbeyn keento Xidig ka Tirsan Manchester United
November 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay xiiso u qabto saxiixa Xidiga Manchester United ee Jesse Lingard .
Mustaqbalka 28-sano jirkaan ee Old Trafford ayaa weli su’aal la gelinayaa, isagoo ku dhibtooday inuu boos joogto ah ka helo kooxda bilihii furitaanka xilli ciyaareedka 2021-22.
Qandaraaska Lingard ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, waxaana la fahamsan yahay in xiddiga heerka caalami ee dalka England ay ka go’an tahay inuu ka tago Red Devils inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
West Ham United , Newcastle United iyo Tottenham Hotspur ayaa dhamaantood lagu tiriyaa inay xiiseynayaan weeraryahanka, kaasoo labo gool dhaliyay midna caawiyay sagaal kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , Barcelona ayaa sidoo kale xiiseyneysa Lingard, iyadoo kubadsameeyaha loo arko saxiix jaban iyadoo ay jirto dhibaatada dhaqaale ee kooxda Catalan.
Barcelona ayaa sidoo kale lagu tiriyaa inay xiiseyneyso saaxiibkii Lingard ee Edinson Cavani .